ဒီမိုကရေစီထွန်းကား တည်တံ့ခိုင်မြဲရန် နိုင်ငံရေးအရ ညှိနှိုင်းဖို့လိုအပ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြား
ဒီမိုကရေစီထွန်းကား တည်တံ့ခိုင်မြဲရန် နိုင်ငံရေးအရ ညှိနှိုင်းဖို့လိုအပ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြား မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီထွန်းကားဖို့၊ တည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့ ဆိုရင် နိုင်ငံရေးအရ ငြိမ်းချမ်းစွာ ညိနှိုင်းဖြေရှင်း အဖြေရှာဖို့ လိုအပ်ကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်က တိုင်းရင်းသားပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ်များအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စကားပြောကြားနေစဉ်။
မနေ့ ညနေပိုင်းက တိုင်းရင်းသားပါတီတွေက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ်တွေ တွေ့ဆုံစဉ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က -
"ကျွန်မတို့ ဒီလို အဖြေသာ လွယ်လို့ ရှိလို့ ရှိရင် ဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ တွေ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တွေ ဘာတွေ ဆိုတဲ့ပြဿနာ ဘယ်တုန်းကမှ တက်လာမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ဒီလိုပြေလည်အောင်လုပ်ဖို့ အဖြေပေါ့နော်။ အဖြေတစ်ခု ကျွန်မတို့ မှာ မရလို့ ဘယ်လိုပြေလည်အောင် လုပ်မလဲဆိုတာ အဲ့တော့ အားလုံးက ဝိုင်းပြီးတော့ ညှိရမှာပဲ။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာပေါ့နော်။ ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု မရှိဘူး။ ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင် Negotiation culture ပေါ့မရှိဘူး။ အဲဒီလုပ်တဲ့ အလေ့အထ မရှိဘူး။ သူ့ အမြင် ကိုယ့်အမြင် တင်ပြတယ်။ အဲဒီ ပုံစံကို အခု ကျွန်မတို့ မလုပ်တတ်ဘူး။ အဲတော့ ဒါကို ကျွန်မတို့အချင်းချင်းတော့ ကျွန်မကဟို လေ့ကျင့်ချင်တယ်"
ဒါ့အပြင် မနေ့က သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ အခြေခံဥပဒေခုံရုံး ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သဝဏ်လွှာအပေါ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအကြား အငြင်းပွားစရာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရေးဟာ အဓိကကျကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ တပ်မတော်သား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ အချင်းချင်း နားလည်မှုရအောင် လုပ်ကြဖို့ လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။
"ကျွန်မတို့ ဒါတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောမယ်နော်။ ကျွန်မတို့ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ကျွန်မတို့ အများကြီး ပြောတယ်။ တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ တတ်နိုင်သမျှ ခင်မင်အောင် ပေါင်းပါ။ သူ့အမြင် ကိုယ့်အမြင် သိဖို့လိုတယ်။ အဆင်ပြေဖို့ လိုတယ်။ နောက်ဆုံးကျတော့ တပ်မတော် သဘောမတူပဲနဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီစနစ် ဘယ်တော့မှ မခိုင်မြဲနိုင်ဘူး။ အခုဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရကို မခိုင်မြဲနိုင်ဘူး။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရကို တပ်မတော်ရဲ့ သဘောဆန္ဒရှိသ၍သာ ဒီလွှတ်တော်က တည်မှာ။ တခြားဟာတွေ ကျွန်မတို့ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ပြောနေစရာမလိုဘူး။ တပ်မတော် အလိုရှိသလောက်ပဲ ဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရ၊ တပ်မတော် အလိုရှိသလောက်ပဲ ကျွန်မတို့ရဲ့ လွှတ်တော်ရဲ့ သက်တမ်းကရှိမှာ။ အဲတော့ အဲဒီလို ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေမှာ လက်တွေ့ကျကျ ကျွန်မတို့ တပ်မတော်ကနေပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီကို နားလည် လက်ခံလာမှ တကယ့် စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ အုတ်မြစ်ကျွန်မတို့ ချနိုင်မယ်"
အခြေခံဥပဒေခုံရုံးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ စွပ်စွဲပြစ်တင်နေမယ့်အစား ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်တဲ့ နည်းလမ်းကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ပိုမိုကောင်းမယ်လို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က မနေ့က အကြောင်းပြန်ကြားခဲ့တဲ့အပေါ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေက လက်မခံနိုင်ဘဲ ခုံရုံးတာဝန်ရှိသူတွေ နှုတ်ထွက်ကြဖို့ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လက လွှတ်တော်ရေးရာ ကော်မတီတွေကို ပြည်ထောင်စုအဆင့်နဲ့ မညီဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒါဟာ ခုံရုံးအနေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကို ဖောက်ဖျက်တာဖြစ်ပြီး ဥပဒေအရ ပေးအပ်ထားတဲ့ တာဝန်တွေကို ကျေပွန်စွာ မထမ်းဆောင်နိုင်တာ ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ရာထူးကနေ အနားယူပေးဖို့ တပ်မတော်သားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ အပါအ၀င် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၃၀၀ ကျော်က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။
NLD ညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ်ရွေးပွဲ တာမွေမြို့နယ်မှာ ကျင်းပ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံ မတ်လထဲ ကျင်းပမည်
ရခိုင်ပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့အစည်းအဝေး စစ်တွေမှာ ကျင်းပ
ကဲ... ကျွန်တော်ကတော့ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာ တပ်မတော်က စိတ်ကောင်းရှိမှ လွှတ်တော်ကတည်နေမယ် နိုင်ငံ ရေးဆက်လုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ဒီတပ်မတော်ကလူတွေနဲ့ လမ်းခွဲပြီး စစ်အာဏာရှင်တွေ မျိုးပြုတ်သွားအောင်တိုက်ရုံဘဲ။ ဒါကလည်းလွယ်လွယ်လေးပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် အမိန့်ပေးလိုက်စမ်းပါ။ Aug 21, 2012 08:02 AM
Hi, you all haven't do anything yet, now want to quarrel each other now, what the rubbish? I agree with what President said, because of Constitution, constitution committee is involved in, if not they will not be there anymore..., so must chang first Constitution... then other carry on, collect the many vote from Hluttaw then change Constitution. We all can win if we BE UNITED!